LGBT လို့ထုတ်ပြောတော့မှာလား ??? | သိလိုရာမေး
ထွေလာဆန်းပြား လိင်ဆောင်းပါး, နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာမယ် LGBT လို့ထုတ်ပြောတော့မှာလား ???
း ကိုယ်က LGBT ဆိုတာ သေချာနေပြီဆိုရင် တစ်နေ့မဟုတ် သိမှာချင်းအတူတူ အနည်းဆုံးတော့ မိသားစု၊ ပြီးရင် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို မဖြစ်မနေ အသိပေးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။
အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် မိရိုးဖလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ🇲🇲 ကိုယ့်ကိုယ်ကို 🏳️🌈LGBT 🏳️🌈ဆိုတာ ထုတ်ပြောဖို့ တော်တော်ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ်က LGBT ဆိုတာ သေချာနေပြီဆိုရင် တစ်နေ့မဟုတ် သိမှာချင်းအတူတူ အနည်းဆုံးတော့ မိသားစု၊ ပြီးရင် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တွေကို မဖြစ်မနေ အသိပေးတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ဒီလို ထုတ်ပြောပြီးရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို သိလိုရာမေးက ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ် ဘယ်အရာမဆို ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တိုက်ခတ်မှုကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ပြီးတော့ LGBT ဆိုတာနဲ့ အားပေးတာထက် ရှုံ့ချတာ ပိုများမှာပဲ မဟုတ်လား။ ဒီလိုဒဏ်တွေကို ခံနိုင်ဖို့ အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ထားမှသာ တော်ရာကျမှာပါ။ LGBT ဆိုရင် သာမန်ထက် စိတ်ဓါတ်ကြံ့ခိုင်ရပါမယ်၊ အရမ်း မဖီးလ်ဘဲ လျစ်လျူရှုတတ်ရပါမယ်၊ တိုင်ပင်ဖော် ရင်ဖွင့်ဘက်ရှိရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ယောက်တည်း မျိုသိပ်တာ များလာတာနဲ့အမျှ နေရထိုင်ရ ပိုကျဉ်းကျပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်လည်း ကိုယ့်ဘဝကိုယ် အရှုံးပေးသွားတဲ့ လိင်ကွဲချစ်သူတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်❤️။ ကိုယ်ကထုတ်ပြောပြီးရင်တော့ ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ စိတ်ဓါတ်💪🏼ကြံ့ခိုင်နေဖို့ 💪🏼အရေးကြီးပါတယ်။
လိင်ကွဲချစ်သူဖြစ်တာ ထုတ်ပြောပြီးရင် ဘယ်သူပဲ ဘယ်လောက်ပဲ တိုက်ခိုက်စောင်းမြောင်းနေပါစေ ကိုယ့်ဘာကိုယ် ဖုံးထားတဲ့စိတ်တော့ ရှင်းသွားမှာပါ။ သူတို့လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်အတွက်တော့ အလုံးကြီးကျသွားတာပေါ့။ ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲ စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ မိန်းကလေးလို ဒါမှမဟုတ် ယောက်ျားလေးလို ဝတ်ဆင်သွားလာနိုင်ပါပြီ🕴️👗👕👙
ကိုယ်ဘာလဲဆိုတာ သူများတွေ သိသွားပြီ ဆိုပေမယ့် အများအမြင် မရိုင်းအောင်၊ ဟော့ဟော့ရမ်းရမ်း မဖြစ်အောင် သတိထားရပါမယ်။ LBGT🏳️🌈 တွေကြားထဲမှာ ဆိုရင် ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် LGBT🏳️🌈 တွေကို ကန့်ကွက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ နည်းနည်းလောက် အမှားလုပ်တာနဲ့ သာမန်လိင်တူတွေထက် ပိုပြီး ထုထောင်းဖို့ အသင့်စောင့်နေသူတွေ အများကြီး ရှိတဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ပေုံထိုင်ပုံ တွေကို အထူးဂရုစိုက် နေထိုင်တာ အကောင်းဆုံးပါ။ စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဆိုရင် ဘယ်သူမှ လာပြောရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အခက်အခဲ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကိုယ့်ဘက်မှာ ရပ်တည်ပေးမယ့် စိတ်တူကိုယ်တူ 🏠အဖွဲ့အစည်းရှိထားတာ 🏠 အကောင်းဆုံးပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ LGBT အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှာတာ မခက်တော့သလို Color Rainbow http://www.colorsrainbow.com/ လိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးက သင့်အတွက် အများကြီး အထောက်အကူပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ကဟာတွေ လုပ်ပြီးပြီဆိုရင် အချစ်ရှာရတာလည်း လွယ်ကူသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကိုယ်က LGBT ဆိုတာ မဖွင့်ပြောသေးလို့ ဘေးနားမှာ စောင့်နေတဲ့သူလည်း ရှိနိုင်သလို အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလည်း တွေ့နိုင်မှာပါ။ အဲ့ထဲကမှ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်မယ့်သူကို ရွေးပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လက်တွဲနိုင်ပါပြီ❤️
ဒီအချက်တွေကို သိပြီးရင် 🏳️🌈LGBT🏳️🌈 တွေအတွက်လည်း ထုတ်ပြောဖို့ မစိုးရိမ်တော့ဘူးလို့ မျှော်လင့်သလို တခြားသူတွေလည်း ကိုယ်ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းရဲ့ လိင်စိတ်တိမ်းညွတ်တဲ့အရာအတွက် ဘယ်လောက်တောင် ခက်ခဲနေမလဲဆိုတာ စာနာနားလည်ပေးနိုင်ရင်း မိတ်ဆွေစစ်အဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည် ပေးသွားနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်🏳️🌈🏳️🌈